केही व्यक्तिको निजी स्वार्थको कारण महासंघमा समस्या : सुरज वैद्यको अन्तर्वार्ता
प्रकाशित : 12:54 pm, आइतबार, मंसिर ७, २०७७
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन नजिकिएसँगै व्यवसायीहरु प्यानल नै बनाएर चुनावी दौडमा सहभागी भएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने भएसँगै शेखर गोल्छाले आगामी मंसिर १४ गतेबाट महासंघको नेतृत्व गर्ने छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान प्यानल नै बनाएर चुनावी दौडमा होमिएका छन् ।
व्यवसायीक क्षेत्रको समस्या, वैचारीक मुद्दा र आगामी नेतृत्वका अवसर र चुनौतीको पेरिफेरिमा रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा सार्क चेम्बर अफ कर्मशका निवर्तमान अध्यक्ष सुरज वैद्यसँग चाणक्य पोष्टले गरेको कुराकानीको संम्दादित अंशः
महासंघ व्यवसायीले व्यक्तिगत रुपमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने संस्थामा परिणत भयो भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ नि ?
महासंघ व्यवसायीको समस्या र आवश्यकता पुरागर्न नभइ नहुने संस्था हो । निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक विकास र औद्योगिक विकासमा बाटो देखाउने काम गर्छ । यहाँ हरेक भौगोलिक क्षेत्र र व्यवसायीक प्रतिष्ठानबाट आउने मानिसले आफ्नो नेतृत्व छनोट गर्ने गर्छन् । चैतमा नै निर्वाचन हुनु पर्ने थियो कोभिड १९ को कारण संभव हुन सकेन ।
पछिल्ला दिनमा समाजमा गठन हुने उपभोक्त समितिदेखि देशले गर्ने आवधिक निर्वाचनसम्म चुनाव नै चुनावको मात्रै कुरा हुने गरेको छ । यसले हाम्रो पूरै समाजलाई विभक्त गर्दै लगेको हामीले देखेका छौं । यस्ता चुनावले संस्थाहरुलाई बलियो बनाएर लानु पर्ने हो तर, हाम्रोमा यस्ता गतिविधिलाई सहज रुपमा लिन नसक्दा संस्थाहरु कमजोर बन्दै गएका छन् ।
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको छ । समस्या धेरै छन् । ती समस्या समाधान गर्न आत्मकेन्द्रित नेतृत्वले संभव छैन । हाम्रा साना मझौला उद्योग बन्द अवस्थामा पुगेका छौं । अर्बौ लगानी भएका पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध होटल, रेष्टुरा, एयरलाइन्सहरुको अवस्था नाजुक भएको छ । हाम्रो निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । महासंघले आफ्नो ५४ औँ वार्षिक साधारण सभा गरिरहँदा यी र यस्ता क्षेत्रमा देखिएको समस्यासँग एकजुट भएर कसरी लड्न सकिन्छ भनेर बहस हुनु पर्थ्याे । निर्वाचन नै गरेर नेतृत्वमा कसलाई लग्ने भन्ने विषय गौण थियो । यद्यपि हामी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्ने भएकाले यसलाई सामान्य प्रक्रियाको रुपमा सबै साथीहरुले बुझेर अगाडी बढ्नु पर्ने देख्छु । निर्वाचनको परिणाम जस्तो सुकै आएपनि निर्वाचनको भोलिपल्टबाट सबै एक साथ भएर अहिलेको समस्या समाधानमा नेतृत्व जुट्न सक्नु पर्छ ।
तपाईंको आसय सहमतिबाटै नेतृत्व चुन्नु पर्ने थियो भन्ने लाग्यो । यस्तोमा सहमतीको संभावना कत्तिको देख्नु भएको छ ?
सहमति भन्ने शब्द सुन्दा जति सुन्दर लाग्छ, गर्न त्यति नै कठिन हुँदै गएको छ । त्यो महासंघमा मात्र होइन अघि भनेजस्तो हरेक संस्थामा । सहमति हुनै सबै खुल्लारुपमा प्रस्तुत हुनु पर्छ । सर्त राखेर सहमतीको प्रयास हुन सक्दैन । महासंघ राजनीतिक दल जस्तो संस्था होइन, त्यसैले त हाम्रो झण्डा छैन । अहिलेको विषम परिस्थितिमा हामी सबै एकजुट भएर अगाडी बढ्न सकेको भए राम्रो हुने थियो ।
महासंघमा जोडिएका केही व्यक्तिहरुको आवेग र व्यवसयानै बनाउने ध्ययका कारण मिलेर जान चाहने साथीहरु पनि जवर्जस्ती चुनावमा गएका छन् । मैले वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका साथीहरु मिलेरै जान चाहेको बुझेको छु । तर, त्यसमा सार्थक परिणाम आउने देख्दिन ।
यस्तो परिस्थितिमा पनि मिल्न नदिने साथीहरु को हुन् ? कसलाई भन्न खोज्नु भएको ?
हरेक संघ/संस्थामा व्यक्तिगत लाभ खोज्ने मानिसहरुको ठूलै भिड नेपालमा भेट्न पाइन्छ । त्यसबाट महासंघ अछुतो छैन । म अहिले कुनै एउटा व्यक्तिको नाम नै लिएर भन्न चाहन्न । सबैले बुझेकै छन् । अरुको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन चाहने र खोज्नेहरु हावी भएपछि नेतृत्वमा विचलन आउँछ । त्यसैले महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुले मिलेर जानुहोस् भनेका हुन् । हाम्रो व्यवसायीक चरित्र यहाँ प्रस्तुत होस् भन्ने हामीले चाहेका हौं । त्यसैले हरेक निर्वाचनको समयमा हामी सहमतीको प्रयास गर्छौ तर, हाम्रा कुरा उमेद्वार बन्नेको बुझाइमा पर्दैन ।
निर्वाचन भएपनि वा सहमती भएपनि कस्ता मानिस नेतृत्वमा आउँदा महासंघ बलियो हुन्छ ?
मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, ‘आफ्नो होइन, राम्रो मान्छे’ नेतृत्वमा आउनु पर्छ । अहिले हाम्रा सामु चुनौतीका चाङ्ग छन् । द्धन्दको समयभन्दा पनि जटिल मोडमा हाम्रो अर्थतन्त्र पुगेको छ । हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प प्रायः रहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा नै समस्या देखिएको छ । यस्तो समयमा अर्थतन्त्रका बहुआयामिक पाटाहरु केलाउन सक्ने मानिस नेतृत्वमा आउनु पर्छ । हाम्रो अध्यक्ष विधानत आउने निर्णय भइसकेको छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका अन्य पदाधिकारी निर्वाचनले चयन गर्ने छ । यस्तोमा महासंघले नेपाल सरकारसँग धेरै काम गर्नु पर्ने छ । सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रको पुल बन्नु पर्ने भएकाले व्यवसायीक समस्या र चुनौतीलाई राख्न सक्ने मानिस चुनाव जितेर आउनु पर्छ ।
सक्षम व्यक्तिहरु न आएको खण्डमा यी काम हुन सक्दैन । हाम्रा महासंघका मतदाता निकै बुझेका व्यक्तिहरु हुनु हुन्छ । त्यसैले उहाँहरुले यी सबै बुझेका मानिसलाई नै नेतृत्वमा ल्याउनु हुने छ भन्नेमा ढुक्क छु ।
« कुन बैंकबाट ऋण लिँदा सस्तो, यस्तो छ बैंकहरूको बेसरेट
हिउँदमा भारतबाट २५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने »